November 28, 2020 - Achawlaymyar
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညတွင် မယ်ဇလီဖူးသုပ် စားရခြင်းအကြောင်း…..“ဆေးပေါင်းခသည့်ည”
November 28, 2020 by Achawlaymyar
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညတွင် မယ်ဇလီဖူးသုပ် စားရခြင်းအကြောင်း တန်ဆောင်မုန်းလအခါတွင် ဆေးပင်အပေါင်းကို စေါင့်သောနတ်တို့သည် မယ်ဇလီပင်စေါင့်နတ်မင်းအား တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း လာရောက်ခစားကြသည်။ မယ်ဇလီဖူးကို စားသုံးခဲ့သော် ၊(၉၆)ပါးသော ရောဂါများကင်းရှင်း၍ ဘုန်းကြီးအသက်ရှည်နိုင်သည် ဟု ၊“သာရကောမုဒိ” ဆေးကျမ်း ကပြဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၊ မြန်မာ့ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် အခါသမယတွင် ၊မယ်ဇလီဖူး ကိုအဆာစုံစွာသုပ်၍ မိသားစုဝင်များအားလုံးစားသုံးကာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးချင်းများအားလည်း ၊ မယ်ဇလီဖူးသုပ်အထုပ်ငယ်များကို ဆေးဝါးအဖြစ်ပေးဝေလျက် ဒါနပြုလေ့ရှိကြပါသည်။ နက္ခတ်၊ ကြယ်တာရာ စုံညီစွာပေါ်ထွန်းသောကြောင့် ၊ဆေးအာနိသင်များ နိုးကြွထက်မြက်စေ၍ “ဆေးပေါင်းခသည့်ည” -ဟုလည်း ၊ယုံကြည်ကြသည်။ ဤညအခါ၌ ၊ခူး ဆွတ် တူးဖေါ်ရရှိသော ဆေးပင် ၊ဆေးရွက်၊ အမြစ် ၊ အဖု ၊အဥ တို့ကို အထူးသိမ်းဆည်းထားကာ အလိုရှိရာအခါ၌ ၊အသုံးပြုကြသည်။ … Read more
ရန်ကုန်မြို့မှာ မြွေကြီးတွေ အတွေ့ရများလာတဲ့ အကြောင်းရင်း နောက်ကွယ်…..
ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်နေ့အထိ လမ်းသွားလမ်းလာနှင့် နေအိမ်ခြံဝင်းတို့တွင်မြွေများတွေ့ရှိမှု ခုနစ်ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး ထိုထဲတွင် ကြီးမားသည့် စပါးအုံး မြွေများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ ၁၂ ရက်အတွင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးပေးခဲ့ရသည့် မြွေ ခုနစ်ကောင် အနက်နှစ်ကောင်မှာ အရွယ်အစားကြီးမားသည့် စပါးအုံး မြွေများဖြစ်ပါတယ်။စပါးအုံးကဲ့သို့ အရွယ်အစားကြီးမားသည့် မြွေအမျိုးအစားအပါအဝင် မြွေတွေ့ရှိမှု များလာရခြင်းမှာ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ မြေအောက်တွင် ပြောင်းလဲမှု တစုံတရာရှိနေနိုင်ခြင်းနှင့် အစာရှာဖွေရေးအတွက် ထွက်ရှိလာသည့် သဘော ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် အချို့က ပြောပါတယ်။ “အခုလိုမျိုး လက္ခဏာတွေပြတယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ခြေမှာ မြေအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေကဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။ ငလျင်တွေ ဒီ့ထက်လှုပ်လာမလား။ ရေတွေ ဒီ့ထက်ခမ်းသွားမလား။ အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့တော့ ထင်တယ်” … Read more
ပထမဆုံး အတွေ့ ကြုံမှာ ချစ်သူလေးကို ဘယ်လိုနမ်းမလဲ?
သူတို့တကယျခဈြမိသှားတဲ့ မိနျးကလေးကို ဒီလိုလုပျပေးတယျဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့….
ဘယ်မိန်းမကိုမှ အလိုလိုက်ပြီး “အဲ့လောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ယောင်္ကျား…. သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးကို ခြေထောက်ကိုင်ပြီး ဖိနပ်စီးပေးဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြဘူးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! သူ့အမေကလွဲပြီး ဘယ်မိန်းမကမှ “ဆံပင်ကိုင်တာ .. ခေါင်းကိုင်တာမျိုး”ကိုလက်မခံတဲ့ယောင်္ကျား … သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးက ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲတတ်တာမျိုး .. နားရွက်လိမ်ဆွဲတတ်တာမျိုးလေးကိုပဲ အပြုံးမပျက်ဘူးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! ယောင်္ကျားသဘာဝ ကပြက်ကချော်နိုင်ပြီး အချိန်ကိုလေးစားရကောင်းမှန်း မသိတတ်တဲ့ယောင်္ကျား …… သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်နောက်ကျသွားရင် စိတ်ဆိုးမှာကြောက်တတ်တာကြောင့် အချိန်တိကျသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ သူတို့ကိုယ် သူတို့တောင် ဂရုစိုက်ရမှန်းမသိတဲ့ယောင်္ကျား ……. သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးနှာစီး/ချောင်းဆိုးတာလေးကအစ လိုက်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ဂရုစိုက်နေဖို့ မှာတတ်သွားကြတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဆုံးမ ဆုံးမ .. မနာခံခဲ့ဘဲ ခပ်ဆိုးဆိုးအကျင်းတွေကိုပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ယောင်္ကျား ……….. သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့မိန်းကလေး … Read more
ချစ်သူရှိတဲ့ သူတိုင်း အလွတ်ကျက်ထားသင့်တဲ့ စကား ( ၈ ) ခွန်း……
ချစ်သူရှိတဲ့ သူတိုင်း အလွတ်ကျက်ထားသင့်တဲ့ စကား ( ၈ ) ခွန်း အချစ်ရေးရေရှည်တည်မြဲဖို့ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ထိန်းသိမ်းရမယ့်အပိုင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သင်က အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီအချစ်ရေးကို အဆုံးထိခိုင်မြဲချင်တဲ့သူဆိုရင် သင့်ချစ်သူကောင်မလေးအတွက် သင့်ဘက်က လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ချီးမွမ်းပြောဆိုတာ ခံချင်တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ ပြီးတော့ သူဟာ သင့်ဘ၀မှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုလည်း သင်ပြောတာမျိုး ခံချင်မှာပါ။ အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကို နေ့တိုင်းပြောဆိုပေးရမယ့် အရာလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ် ဒီစကားကရိုးလွန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သင်တို့နှစ်ဦးအတွက် တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အလုပ်မသွားခင်၊ ဒါမှမဟုတ် မနက်ပိုင်း ချစ်သူဆီဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ၊ ညဘက်အိပ်ခါနီးဖုန်းဆက်တဲ့အခါတွေမှာ ဖုန်းချခါနီးတိုင်း သင့်ကောင်မလေးကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေး မပျက်မကွက်ပြောပါ။ ၂။ မင်းက … Read more
မိမိတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံကို ချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလိုက်ပါ
မိမိတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံကို ချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလိုက်ပါ မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခညားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်သူကစလိုက်တယ်မသိ။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးသူတွေရဲ့ လက်သုံးစကား လက်နက် ကြီး ဖြစ်လို့။ ဒီတော့ ငွေရှင်ခမျာလည်း အတိုးလေးရလို့ ချေးမိတာ ။ အခုပြန်တောင်းတော့ တချိန်က မျက်နာ ငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဆီက ငွေချေးခဲ့တဲ့သူက အခုတော့ မျက်နာထားကြီးတင်းပြီး ကိုယ်ကပဲ သူဆီက ပြန်ချေးနေသလိုလို။ဒီလိုတောင်းလို့မရရင် တရားစွဲတောင်းမယ်လို့ စိတ်ထဲက ပြင်ထားပေမယ့် တစ်ဖက်က အတိုးပါတဲ့အတွက် ထောင် ၅ နှစ် ချလို့ရ တယ်လို့ပြောလာတော့ စိတ်ထဲမှာ ချေးထားမိတဲ့ငွေ ကူညီပေးထားတဲ့ငွေလေး ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလား ဆိုပီး သောကအပူတွေဖြစ်။အတိုးပါရင် … Read more